स्वास्थ्य Archives - E mechi
Apr262019 by News Desk SectionNo Comments
के तपाईलाई निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? यस्तो गर्नुहोस झ्याप्पै निदाउनुहुन्छ (भिडियो)
निन्द्रालाई मानिसको आधारभूत आवश्यकतामध्येको एक मानिन्छ ।सफल जीवनका लागि आवश्यकताअनुसारको निन्द्रा चाहिन्छ । कस्तो व्यक्तिलाई कति निन्द्राको आवश्यकता छ भन्ने कुरा फरक–फरक हुन्छ । दैनिक प्रत्येक व्यक्तिले यति घण्टा नै सुत्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । प्रत्येक व्यक्तिमा फरक हुन्छ तर लगभग २४ घण्टामा ६ देखि ८ घण्टा सुत्नुपर्छ । कसैलाई कम निन्द्राको आवश्यकता पर्छ भने कसैलाई अलि बढी आवश्यकता पर्छ । भर्खरै जन्मिएकाबच्चाहरूले त धेरै समय निन्द्रामा नै बिताउँछन् ।उनीहरूले दैनिक १८ देखि २० घण्टा त निन्द्रामा नै बिताउँछन् । वयष्क मानिसले भने ६ देखि ८ घण्टा हुनुपर्छ । तर निन्द्रा नलाग्ने भन्ने कुरालाई हामीले समय तालिकालाई मात्र हेर्नु हुँदैन । कसैलाई निन्द्रा पर्न गाह्रो हुन्छ भने कसैलाई पातलो निन्द्रा पर्ने अथवा पटक–पटक बिउँझिराख्ने र कसैलाई चाहिँछिटो बिउँझिने हुन्छ । हेर्नुहोस भिडियो :
तपाईको ब्लड ग्रुप कुन ? आफ्नो स्वभाव बानी ब्यहेरा के कस्तो छ भनि जानकारी को लागि पढ्नुहोस काईदाको टिप्स
तपाईको ब्लड ग्रुप कुन ? आफ्नो स्वभाव बानी ब्यहेरा के कस्तो छ भनि जानकारी को लागि पढ्नुहोस काईदाको टिप्स कसैले तपाईको पैसा फिर्ता गरिरहेको छैन वा दुःख दिइरहेको छ भने अपनाउनुहोस यो सजिलो तरिका……पूरा पढ्नु होस ।। यदी कसैले तपाईको पैसा फिर्ता गरिरहेको छैन या बिनाकारण तपाईलाई दुःख दिइरहेको छ भने अथवा कुनै मानिसबाट तपाईलाई समस्या भैरहेको छ भने तपाईले नरिवलको यो सजिलो तरिका अपनाएमा दुश्मनबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । आउनुहोस यो तरिका थाहा पाइ राखौँ १. यो उपाए कुनै पनि मंगलबार, शनिबार या औंसीको दिनमा गर्न सकिन्छ । २. यो उपाय अपनाउनको लागि तपाईलाई एक बिना पानीको नरिवल लिनुपर्ने छ । ३. सिन्दुरको मसि बनाएर वा सिन्दुरलाई तेलमा घोलेर एक डन्डीको माध्यमले कुनै कुनामा शत्रुको नाम लेख्नुहोस । ४. यो नरिवललाई सात पटक आफ्नो सिर माथिबाट घडिको उल्टो दिशामा घुमाउनुहोस । ५ यसपछि नरिवललाई कुनै पुरानो
घ्युकुमारीको जुस पिउदा र लगाउदा हुने फाइदाहरु
घ्युकुमारीको करिब २ सय ५० प्रजाति रहेका छन् । यसमध्ये केही प्रजातिमात्र औषधीय गुण हुने गर्छ । यसमा सबैभन्दा प्रभावशाली प्रजाती बार्बाडेन्सीस वा एलोभेरा हो । हाम्रो शरिरको सही विकाका लागी २१ वटा एमिनो एसिडको आवश्यकता पर्छ । यसमा १८ वटा एमिनो एसिड एलोभेरामा पाइन्छ । एलोभेरा जुसमा क्याल्सियम, सोडियम, आइरन, पोटासियम, क्रोमियम, मैगनीज, ताम्बा जस्ता खनिज पदार्थ पाइन्छ । एलोभेरामा १८ धातु, १५ एमिनो एसिड, र १२ थरीका भिटामिन पाइन्छ । यसले शरिरमा रगतको मात्राको कमीलाई कम गर्नुका साथै शरिरमा प्रतिरोधी क्षमतामा बृद्धी गर्छ । एलोभेरा जुस गर्भासयको रोग तथा पेटको विकार नष्ट गर्नका लागि समेत फाइदा पुर्याउँछ । गर्मी, वर्षाका कारण हुने विभिन्न समस्याबाट समेत यसले मुक्ति दिने गर्छ। गुलाब जलमा एलोभेराको रस मिसाएर अनुहारमा लगाउनाले अनुहारमा चमकता आउँछ । यस्तो छ एलोभेराको जुस पिउनुले हुने फाइदाहरू‘ प्
काठमाडौं । सामान्यतया खुर्सानी खानु आफैंमा राम्रो हुँदैन । तर मिलाएर खान सक्यो भने खुर्सानीले अचुक फाइदा दिन्छ । तपाई हाम्रै घरमा पाइने डल्ले अर्थात रातो खुर्सानी औषधिका रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ । डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्ट्रिक तथा अल्सर जस्ता रोगको लागि उपयोगी सिद्ध हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । डल्ले खुर्सानीमा पाइने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पुग्ने बताइएको छ । यो खुर्सानीको नियमित सेवनले ग्यास्ट्रिक तथा अल्सरको संक्रमण बाट बचाउनुको साथै मोटोपन घटाउन सहयोग गर्छ ।रगतमा चिनीको मात्रा घटाउछ । पिसाबको बिरामीलाई लाभदायक हुन्छ । हाडजोर्नी लगायतका दुखाइ घटाउँछ । विशेष गरेर अकबरे खुसार्नी हालेर बनाइएको परिकारमा किटाणुको संक्रमण कम हुन्छ थकाइ पनि मेटाउँने विश्वास गरिएको छ ।
यो एउटै सब्जी जसले हृदयघातको जोखिम जरैदेखि समाप्त पार्नेछ, जान्नुस कसरी?
सलगम एक यस्तो सब्जी हो जो खानामा धेरै स्वादिस्ट लाग्छ। शलगम को सब्जी पोषक तत्वले भरिपुर्ण हुन्छ। भिटामिन ए सी ले भरपुर यसको हरियो पात सलाद को रुपमा पनि खाइन्छ। यसमा कम क्यालोरी हुन्छ, जसले गर्दा सरिर को तौल घटाउन चाहने हरुको लागि पनि यो एक उत्तम विकल्प हो। फाइबरले भरिपुर्ण यो साब्जी पाचन प्रक्रियालाई राम्रो गर्नु को साथै लामो समय देखिको कब्जियत जस्तो गम्भीर समस्याबाट बचाउन मा पनि महत्वपुर्ण सहयोगी भूमिका खेल्दछ। भनिन्छ यदि तपाइले सलगमको सब्जिलाई खानामा सामेल गर्नु भयो भने यसले हार्ट अटेक जस्तो गम्भीर समस्याबाट मुक्त गर्द्छ।आउनुस हेरौ यो कुरा कति साचो हो त? सलगममा फाइबर भरपुर मात्रामा हुन्छ जसले गर्दा यो दिशा राम्रोसग खलास गर्न ठुलो सहयोग पुराउदछ। यदि तपाई कब्जियतको समस्या बाट पिडित हुनुहुन्छः भने यसको सब्जी अवस्य खानुहोस। त्यसैले इमुनिटी पावरलाई मजबुत बनाउने हो भने तपाई सलागमको सब्जी
काठमाडौँ – सुन्दरता नारीको पहिचान हो । तर अनुहारमा आएका अनावश्य दागहरुको कारण सुन्दरतामा दरार उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण यस्तै पिडाले हजारौँ पैसा खर्चेर दिक्क भएका व्यक्तिहरुको लागि आज हामी अनुहारमा भएको ब्ल्याकहेड्स र वाइटहेड्स हटाउने उपायबारे बताउन गइरहेका छौँ । आवश्य सामाग्री – बेकिंग सोडा , एप्पल साइडर भिनेगर – बनाउने तरिका : सुरुमा एउटा सफा कचौरा लिने र त्यसमा एक चम्चा बेकिंग सोडामा दुई चम्चा एप्पल साइडर भिनेगर राख्ने । त्यसपछि यी दुवैलाई राम्रोसँग फिट्ने ।् र याे पनि एउटा सामान्य व्यक्तिको मुटुको चाल (हार्ट विट) प्रति मिनेट ६० देखि एक सयको बीचमा हुनु पर्छ । केही विशेषज्ञहरु ५० देखि ७० लाई पनि सामान्य चाल मान्ने गर्छन् । तर मुटुको चाल सामान्य भन्दा बढी भएमा त्यो स्वास्थ्यका लागि हानीकारक हुनसक्छ, जसलाई चिकित्सकीय भाषामा ट्रेकिकार्डिया भनिन्छ । मुटु रोग तथा रक्तअल्पत्राको समस्
एउटा सामान्य व्यक्तिको मुटुको चाल (हार्ट विट) प्रति मिनेट ६० देखि एक सयको बीचमा हुनु पर्छ । केही विशेषज्ञहरु ५० देखि ७० लाई पनि सामान्य चाल मान्ने गर्छन् । तर मुटुको चाल सामान्य भन्दा बढी भएमा त्यो स्वास्थ्यका लागि हानीकारक हुनसक्छ, जसलाई चिकित्सकीय भाषामा ट्रेकिकार्डिया भनिन्छ । मुटु रोग तथा रक्तअल्पत्राको समस्याले पनि ट्रेकिकार्डिया निम्त्याउन सक्छ, जुन आफैमा जटिल हो । किनकी शारीरिक श्रम, तनाव तथा एक्सरसाइजका कारण मात्र मानिसमा मुटुको चाल अधिक हुने गर्छ । अन्य समय यो सामान्य स्तरमा रहन्छ । र, मुटुको चाललाई मुटुको विद्यतीय तरंगले नियन्त्रित पार्ने गर्छ । तर जब मुटुले असामान्य तरंग उत्पादन गर्न थाल्छ, तब मानिसको मुटुको चाल असामान्य हुने गर्छ । र, असामान्य मुटुको चाल भएमा हृदयाघात, स्ट्रोक लगायतका समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले, यदी कसैले यस किसिमको समस्या भोगिरहनु भएको छ भने कम्तीम
सेक्स गर्दा स्तन मिच्ने कि नमिच्ने ? यस्तो छ अध्ययनको निष्कर्ष !
यौन सम्पर्क (सेक्स) गर्ने क्रमलाई आनन्दमय बनाउन मानिसहरू अनेक उपाय सोच्छन् । सेक्सका क्रममा पुरुष साथीले महिलाको स्तन मिच्ने समेत गर्छन् । यौन सम्पर्कअघि यौन उत्तेजना बढाउन स्तन मिच्ने गरेपनि यौन सम्पर्कका क्रममा स्तन मिच्नु ठीक हो कि होइन भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुन सक्छ । यौन पार्टनरको स्तन मिचेर आनन्द उठाउने पुरुषहरूको लागि एउटा अध्ययनको निष्कर्ष खुशी दिने खालको छ । युसी बर्कली र लरेन्स बर्कली राष्ट्रिय प्रयोगशालाले स्तन मिच्दा वा निचोर्दा क्यासनको सेल्स दू्रतगतिमा बढ्न नसक्ने अध्ययनले बताएको छ । भारत्तोलनले मांशपेसी फूलाउने र हड्डी बलियो पारेजस्तै स्तन निचोर्दा स्तनको साइज बढाउने र क्यान्सर रोकथाम गर्ने आन्तिरिक शक्ति थपिने अध्ययनले देखाएको छ । शारीरिक रुपमा सँगसँगै स्तन मिच्दा महिला साथीलाई पनि आनन्द आउने भएकाले स्तन मिच्नु उत्तम नै हुने अध्ययनले जनाएको छ ।
Apr242019 by Editorial DepartmentNo Comments
धेरै पानि पिउदा पनि कहिले कहिं पटक-पटक पिसाब लाग्छ । यसको एउटा मात्र कारण हुँदैन । तर, सामान्य अवस्थामा पटक-पटक पिसाब लाग्छ भने, त्यसले शारीरिक समस्याको संकेत गर्छ । के भनिन्छ भने, पिसाब कति पटक फेरिन्छ भन्ने कुराले समेत हामी कति स्वस्थ्य वा अस्वस्थ्य छौ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्छ । हाम्रो जीवनशैली वा स्वास्थ्य खराब भएमा पटक-पटक पिसाब लाग्न सक्छ । दिनमा कति पटक पिसाब आउनु पर्छ त ? एक दिनमा कति पटक पिसाब फेरिन्छ ? त्यसले हाम्रो स्वस्थ्यबारे बताउँछ । सामान्यत एक दिनमा चारदेखि १० पटकसम्म पिसाब लाग्नु सामान्य हो । औसात व्यक्तिको मुत्राशयमा जति पिसाब जम्मा हुन्छ, त्यसलाई तीनदेखि पाँच घण्टासम्म अवधी रोक्न सकिन्छ । कुन अवस्थामा खतरानाक ? यदि पिसाब गरेको समयमा जलन वा दुखाई महसुष हुन्छ भने यो चिन्ताको विषय हो । यदि सामान्य अवस्थामा पनि पटक-पटक पिसाब लाग्छ भने, त्यो समस्या हो । यसरी पटक
यौनसम्पर्कको यस्तो शैली जुन महिलालाई निकै मन पर्छ ! लाज नमानी पूरा विवरण हेरि सेयर गरौं
कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ, किनकि मानिसका रुची फरक फरक हुनसक्छन् । हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको छ । महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ रु कस्तो खालको संसर्गको शैली मन पर्दछ रु अनि सेक्समा के कुराले मूड अन गरिदिन्छ रु भन्ने विषयमा सोधिएको थियो । उक्त अनलाइन सर्भेक्षणले केही रोचक नतिजा दिएको छ । झण्डै चार लाख मानिसले भाग लिएको उक्त सर्भेक्षणमा ६२ प्रतिशत महिलाहरुले सेक्सका बेला आफूलाई आफ्नो पुरुष पार्टनर अश्लील तथा छाडा भएको मन पर्ने बताए । त्यस्तै ६२ प्रतिशत महिलाहरुले यौन सम्पर्कका बेला आफ्नो पार्टनरको जिउका रौँसँग सुम्सुम्याउँदै पाकक्रिडा गर्न मन पर्ने बताए । ६० प्रतिशत महिलाले यौन सम्पर्कका बेला पार्टनरलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्दा आनन्द आउने बताएका छन् । जिउका रौँ तान